छोराछोरीको दूधे दाँत सम्हालेर राख्नुस्, काम लाग्छ यस्तो महत्वपूर्ण ठाउँमा ! – " सुलभ खबर "
व्यस्त जीवनशैलीका कारण अभिभावकले छोराछोरीलाई प्रशस्त समय दिन सकिरहेका हुँदैनन् । छोराछोरीलाई स्कुलमा टिफिन पठाउँदा होस् वा रोएको बेला फकाउँदा, गुलिया मिठाइको लोभ देखाइन्छ । आफन्तले पनि घरमा आउँदा बच्चाहरूका लागि आइसक्रिम, क्यान्डीलगायत गुलिया मिठाइ ल्याइदिन्छन् । बालबालिकाले गुलिया खाद्यवस्तु मन पराउने भएकाले उनीहरूको दाँत बिग्रिने सम्भावना अरुको तुलनामा बढी हुने ग्रान्डी अस्पतालका डेन्टल सर्जन अमित खनाल बताउँछन् । गुलिया मिठाइ अत्यधिक सेवन गर्ने तर त्यसअनुसार सफाइमा ध्यान नदिने कारण दाँत बिग्रिने समस्या बालबालिकामा बढी हुन्छ । राति सुत्दा बच्चालाई बोतलको दूध चुसाइरहँदा पनि बच्चाको दाँत किराले खाने डा. खनालको भनाइ छ ।
यसरी लामो समयसम्म दाँतमा अड्केका गुलिया एवं अन्य खानेकुरा केही समयपछि कुहिएर मुखमा अम्ल उत्पन्न हुन्छ, जसले दातँको टल्किने भाग इनामेल र त्यसको डेन्टिनको ह्रास गराउँछ । त्यसपछि विस्तारै अझ भित्री तहसम्म पुगेर अम्लले क्षति पु¥याउँछ । यस्ता खानेकुरा खानासाथ मुख सफा नगर्नाले बालबालिकाको दाँतमा सडनको समस्या देखा पर्छ । डा. खनालका अनुसार दन्तसडन भनेको दाँतमा अड्किएर
बसेको खाना अम्लमा परिवर्तन भई दाँतलाई खाल्डो पार्ने प्रक्रिया हो ।दन्तसडन भएको खण्डमा सुरुमा दाँतमा कालो खाल्डोजस्तो देखा पर्छ र विस्तारै असर बढ्दै जान्छ । खाल्डो परेको दाँतमा खानेकुरा परेमा अड्किने, सिरिङ हुने र खाना टोक्दा दुख्ने हुन्छ । लामो समयसम्म उपचार नभए खाल्डो बढ्दै जरासम्म पुग्छ । त्यसपछि दाँतको दुखाइ बढ्न थाल्छ । पिप जम्मा हुने, गिँजा सुन्निने र दाँतबाट रगत बग्ने हँुदै दात हल्लिने समस्या पनि आउँछ । कार्बनयुक्त पेय पदार्थहरू गुलिया खाना, चकलेट, चाउचाउ, बिस्कुट, जङ्क फुड, चुसेर खाने (क्यान्डी, ललिपप) आदिले दाँत छिटो बिग्रिन्छ ।
विराटनगर । सासलाई रोक्दा वा सास फेर्ने दर कम भएकामा कोभिडको सङ्क्रमण हुने सम्भावना बढी
अधिकांश मानिसले आफ्नो अनुहार सफा गर्नका लागि साबुन या फेसवासको प्रयोग गर्ने गरेका छन। तर
अहिले बजारमा काउली पाउन थालेको छ । प्रायः जाडो मौसममा पाइने काउली बेमौसमी तरकारीका रुपमा
शरीरको विभिन्न भागमा जस्तै घाँटी, गर्दन, हात, पाखुरा वा अन्य भागमा आउने दाद एक जटिल
काठमाडौ । सबैलाई थाहा छ ,टिमुर विशेष गरि अचारको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । टिमुरलाई दानाकै